2019 Inonyanya Kuzivikanwa Peptide Degarelix: Dhaka Inoshandiswa Kune Prostate Cancer
1. Chii chinonzi Degarelix?
2. Chii chinonzi Degarelix poda Inoshandiswa?
3. Degarelix poda Mechanism yeAction
4. Degarelix Kuchinjana
5. Pane chero njodzi here kana ndikapotsa dhigirii Degilix kana overdose?
6. Ndeipi Mhedzisiro Mhedzisiro uye Yambiro inogona Degarelix Inokonzera?
8. Rumwe Ruzivo
Ichiratidza, kenza yeprostate yave iri imwe yezvirwere zvinotyisidzira hutano hwepanyama uye hwepfungwa hwevanhu. Chekutanga kudzivirira uye kurapwa zvakakosha kurapa chirwere ichi. Degarelix poda mushonga unoshanda pakurapa cancer yegomarara, uye isu tinofanirwa kutora danho rekunzwisisa rumwe ruzivo rwakakosha nezvazvo kuti tigone kurishandisa nemazvo uye zvakachengeteka.
Degarelix (214766-78-6) mushonga wehomoni mushonga uyo unoderedza huwandu hwehomoni mumuviri, kusanganisira testosterone. Iyo inorongedzwa pasi pekirasi yemishonga inozivikanwa se gonadotropin-kusunungura mahormone (GnRH) receptor antagonists. Iyi synthetic peptide derivative piritsi inozivikanwa nemhando yayo zita rekuti "Firmagon". Izvi ndizvo zvinotevera zvirevo.
Kirasi Yezvinodhaka: GnRH Analogue; GnRH kupesana; Antigonadotropin
Chemical Fomula: C82H103ClN18O16
Mota yeMolar: 1630.75 g / mol g · mol − 1
Nzira dzeKutonga: Subcutaneous jekiseni
Kubvisa Hafu-Hupenyu: 23-61 mazuva
Degarelix poda inoshandiswa kurapa chirwere cheprostate cancer. Iyo FDA yakabvumidza mushonga wekurapa yekenza yeprostate cancer mune varwere veUS ku24th Zvita, 2008. Pa 17th Kukadzi, 2009, European Commission yakateedzana uye yakabvumidza Degarelix mushonga wekuti ishandiswe mune varwere vakura vechirume vane chirwere chekenza yeprostate.
Cherechedza kuti Degarelix jekiseni inofanira kutarisirwa nachiremba kana mukoti munzvimbo yekurapa. Degarelix inogona kushandisirwa zvimwe zvinangwa. MuSweden, semuenzaniso, mushonga uyu unodzidziswa kuti ushandiswe senge kemikari yakakandirwa mumiriri kuti ivarwe pane vanoita zvepabonde. Degarelix kenza yemazamu kurapwa iri kutaridzwawo senzira yekurapa yekenza yemazamu muvanhurume.
Chiremba wako anogona kukurudzira uyu mushonga kune mamwe mamiriro. Kana iwe usina chokwadi nei nei uri kutora iyi mushonga, zvakakosha kuti utaure nachiremba wako. Sezvimwewo mamwe mishonga, iwe haufanire kupa Degarelix kune chero ani zvake, kunyangwe aine zviratidzo zvakafanana newe. Izvi zvinodaro nekuti mushonga unogona kukuvadza kana ukatorwa pasina zvataurwa nachiremba.
(1) Iwe unofanirwa kuziva chimwe chinhu Extra usati watora Degarelix
Izvi zvinotevera ndizvo zvimwe zvinhu zvakakosha kuti uzive usati watora mushonga uyu:
Degarelix inogona kukonzera kusagadzikana kwechirume. Kana iwe uri kutarisira kuva baba mune ramangwana, zvakakosha kuti iwe utaure nachiremba wako. Ungangoda kufunga nezvekuchengeta sperm usati watanga kurapwa.
Mushonga uyu haubvumirwe kushandiswa nevakadzi. Vakadzi vane pamuviri havafanire kushandisa mushonga uyu. Izvi zvinodaro nekuti mushonga unogona kukuvadza fetus. Vakadzi vanoyamwisa, kana avo vanofunga kuva nevana, vanofanirawo kudzivirira kushandisa mushonga uyu. Muchokwadi, vakadzi vazhinji havafanirwe kushandisa Degarelix.
Hazvina kuchengeteka kutora Degarelix kana iwe uine mamiriro ehutano hwepasi. Ive neshuwa kuzivisa chiremba wako kana iwe uine nguva refu QT chirwere, ichi chiri chidiki moyo dambudziko rinogona kukonzera kukomoka, kusarongeka kwemwoyo, kana kufa kamwe kamwe. Iwe unofanirwa zvakare kuzivisa chiremba wako kana iwe uine mwoyo, itsvo, kana chirwere chechiropa. Taurawo chiremba wako kana uine yakakwirira kana yakaderera masodium, magnesium, potasiamu, kana calcium muropa rako.
Zvakakoshawo kuudza yako pharmacist kana chiremba kana iwe usingarwari kune mamwe mimwe mishonga kana zvinwiwa. Izvi zvichagonesa kuti vazive kana iwe uchinge uchirwara nejekiseni raDegarelix.
Degarelix inouya mune maviri mafomu:
120 mg vial: Imwe neimwe inoshandisa-vial ine 120 mg yeDegarelix powder saDegarelix acetate.
80 mg vial: Imwe neimwe inoshandisa-vial ine 80 mg ye Degarelix poda saDegarelix acetate.
Degarelix inouya mune hupfu fomu, iyo inofanirwa kuve yakasanganiswa neyemvura uye jekiseni pasi peganda munzvimbo yedumbu, pane imwe nzvimbo pakati pemabvu uye chiuno. Kekutanga iwe kugamuchira uyu mushonga, iwe uchapihwa maviri maDegarelix jekiseni. Mushure meyokutanga Degarelix jekiseni dosi, iwe uchagamuchira chete imwe jekiseni panguva yemwedzi yekutevera yekushanya kwako.
Iyo yekutanga dhesi inowanzo Degarelix 240 mg inotumirwa se2 subcutaneous majekiseni eDegarelix 120 mg yega yega pakusangana kwe40 mg / mL. Mushure mekutora dhi yekutanga, unongo gamuchira imwe chete subcutaneous jekiseni re80 mg pakusangana kwe20 mg / mL mazuva ese e28.
Kana uchienda kunogamuchira jekiseni reDegarelix, iwe unofanirwa kudzivirira kupfeka zvakasimba zvipfeko, chiuno kana bhandi rakakomberedza dumbu rako uko jekiseni richazorwiswa. Mushure mekutora jekiseni reDegarelix, simbisa kuti chiuno chako kana bhandi hazvisi kumanikidza munzvimbo yejekiseni. Iwe unofanirwawo kudzivirira kuputira kana kukwenya nzvimbo iyo mushonga wakaiswa.
Kurapa zviratidzo zvegomarara reprostate iro rinovimba ne testosterone yekukura kunoda anogara achiwedzeredzwa mahormone. Kuti uwane izvi, zvakakosha kuti Degarelix acetate inofanirwa kutumirwa zvakanyatso kurudzirwa nachiremba.
Kuve nechokwadi chekuti Degarelix mushonga uri kubatsira mamiriro ako, ungangoda kunoongororwa ropa nguva nenguva. Ive neshuwa kuchengeta zvese zvaunoteedzera kugadzwa nachiremba wako.
Iwe unofanirwa kucherechedzawo kuti Degarelix jekiseni rinogona kukanganisa mhedzisiro yeimwe miedzo yekurapa. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinwa mushonga uyu, ita shuwa kutaurira chiremba wako kuti watambira mushonga uyu kana uchinge uchinge uchitevera zvinotevera pakurapwa.
Iyo testosterone yemurume inonzi inowedzera kukura kwemasero ekenza muprostate. Zvinodhaka zvinodzivirira ma testes kubva mukugadzira testosterone anozivikanwa kunonotsa kana kumisa kukura kwemasero ekenza muProstate. Kune zvakare mishonga iyo inovharira chiitwa che testosterone nekumisa kupihwa kwehomoni yechirume kumasero ekenza.
Degarelix poda (214766-78-6) inoshanda nekudzikisa huwandu hwe testosterone inogadzirwa nemasikirwo nemuviri. Izvo zvinodaro nekuvharidzira GnRH receptors mune pituitary gland muuropi. Izvi zvinodzivirira kugadzirwa kwe liteinising mahormone, nekudaro zvinotadzisa iwo ma testes kuburitsa testosterone.
Kungofanana nezvimwe zvinodhaka zvekenza, Degarelix anogona kupindirana nemimwe mishonga uye zvigadzirwa zvemakwenzi. Izvi zvinotevera ndedzimwe mhando dzemishonga inogona kukonzera kusangana kana yakashandiswa pamwe chete naDegarelix:
Amwe mapuroteni kinase inhibitors
Kusarudza Serotonin Reuptake Inhibitors
Disopyramide, pakati pevamwe.
Kana washandiswa pamwe chete naDegarelix, mimwe mishonga inogona kuwedzera njodzi yemhando yehurombo hwemwoyo rwiyo inozivikanwa seQT kuwedzera. Iwe uri panjodzi yakawedzera yeiyi yakakomba mamiriro uye matambudziko ayo kana iwe:
Ivo vakuru (65 makore uye vakuru)
Iva nenhoroondo yemhuri yeanosarudzika mitezo yemwoyo kana chirwere chemoyo
Iva nenhoroondo yekufa kamwe kamwe kwemwoyo
Iva unononoka kudhonza kana kurova kwemoyo
Iva nekuzvarwa kwenguva refu kweiyo QT nguva
Vari chirwere cheshuga
Wakave uine sitiroko
Iva ne low calcium, magnesium, kana potasium mazinga
Kana iwe uine chero eaya mamiriro ari pamusoro, kana kutora mamwe mishonga yekugadzirisa chero hutano mamiriro, zvakakosha kuti udza chiremba wako usati washandisa Degarelix drug. Ive neshuwa yekuzivisa yako pharmacist kana chiremba nezve iyo mishonga, pamusoro-the-counter mishonga, hutano hwekuwedzeredza, herbal zvigadzirwa uye mavitamini auri kutora kana kuronga kutora. Izvi zvichabatsira kukudzivirira iwe kubva kumishonga inogona kukonzera Degarelix kusangana.
Izvo zvakakosha kuti utaure nachiremba wako nezve yako kurapwa mamiriro uye mishonga iwe yaungave uchitora nekuda kwezvikonzero zvakati. Chekutanga, zvichagonesa chiremba kuti akurukure newe kuti kushandisa mushonga uyu nemamwe mishonga kungakanganisa sei mamiriro ako ekurapa. Chiremba wako achakuzivisa zvakare kuti yako mamiriro ekurapa anogona kukanganisa dosing, pamwe nekushanda kwaDegarelix. Chiremba wako anozokuzivisa iwe kana chero chaiyo yakakosha yekutarisa ichizodiwa.
Iko hakuna ruzivo rwekiriniki nenjodzi dzinosanganisirwa nekushaika kana kunyanyisa paDegarelix. Kunyange zvakadaro, iwe haufanire kurega kutora uyu mushonga pasina kubvunza chiremba wako. Kana iwe ukarasikirwa musangano weiyo Degarelix jekiseni, fonera chiremba wako kuti uwane mirairo.
kubva Degarelix acetate inofanirwa kutumirwa nachiremba, hazvisi zvisinganzwisisike kuti overdose inogona kuitika. Muchiitiko cheDegarelix overdose, zvisinei, zvakakosha kuti iwe unoshevedza yako nzvimbo yekudzora chepfu kana kutsvaga kurapwa nekukurumidza. Gadzirira kuratidza kana kutaurira icho iwe chawakatora, kuti yakawanda sei yawaitora, uye pawakatora.
Sezvimwe zvimwe mishonga yakawanda, Degarelix inogona kukonzera mhedzisiro dzakasiyana. Degarelix mhedzisiro inogona kuve yakapfava kana yakasimba, uye inogonawo kuva yenguva pfupi kana isingaperi. Izvi zvinotevera zvinozivikanwa Degarelix mativi, iyo yakawanda isingazivikanwe nemunhu wese anotora mushonga uyu:
Yakaderedzwa saizi yemaprins
Kuwedzera kuda kudhirowa kazhinji
Kuita kweganda panzvimbo yejekiseni, sekurwadziwa, kutsvuka, kuomarara, kuzvimba
Kunyangwe akawanda emusoro wepamusoro Degerelix mhedzisiro asina kukomba, iwo anogona kutungamira kumatambudziko akakomba kana ivo vakapfuurira kwenguva yakareba. Izvo zvakakosha kuti utsvage rubatsiro rwechiremba kana iwe ukaona zvinotevera zvisingawanzo, asi zvakakomba mhedzisiro:
Bone fractures kana kurwadziwa
Kusagadzikana pazamu uye kuzvimba
Zviratidzo zvakaita seFluku, sekukosora, fivha, kupera simba, uye kurwadziwa kwehuro
Spike muropa cholesterol
Spike pakuda kweropa
Sezvo Degarelix inoderedza kugadzirwa kwe testosterone, inogona kukonzera yakaderera masero eropa tsvuku, mamiriro anozivikanwa seanemia. Zviratidzo zveanemia zvinosanganisira kizunguzungu, ganda rakachenuruka, kuneta kusinganzwisisike uye / kana kupfupika, zvakakosha kuti ubate chiremba wako nekukurumidza. Chiremba wako achaita bvunzo dzeropa nguva nenguva kuti atarise huwandu hwemasero matsvuku eropa ari muropa rako.
Degarelix anonzi zvakare anowedzera njodzi yeshuga. Kana uine chirwere cheshuga, zvakakosha kuti uongororwe nguva dzose kuti uongorore mashuga eropa rako.
Degarelix anonzi zvakare anowedzera njodzi yeeficoporosis. Izvo zvinogona kukonzera kuti pfupa rive diki uye kupwanya zvakanyanya nyore. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine osteoporosis, zvakakosha kuti iwe udzivise chiremba wako kuitira kuti zvigoonekwa kuti mamiriro ako ekurapa angakanganisa sei Degarelix dosing.
Vamwe varwere vanogona kuona Degarelix mhedzisiro kunze kweiyo yakanyorwa pamusoro. Kana iwe ukasangana nechiratidzo chero chipi chinoita kuti usagadzikane kana kunetseka iwe, zviri nani kuti uone chiremba wako pasina kunonoka.
Chiremba wako anogona kukurayira kuti utore kutora majekiseni eDegarelix kuti uwane zviratidzo zvehosha yemwoyo. Zviratidzo izvi zvinogona kusanganisira kurwadziwa kamwe pachipfuva, kurwadziwa kupenya kumusana wako, kunzwa kwekumanikidzwa kana kushomeka kwechipfuva, kusvotwa kwazvo, kurutsa, kutsvaira, uye / kana kunetseka.
Chiremba wako anogona zvakare kukuyambira kuti urege kushandisa Degarelix kuitira kuti iwe ukasangana nezviratidzo zvekunetseka kwakanyanya. Zviratidzo izvi zvinogona kusanganisira angioedema, iyo inoratidzwa nemikoko, kunetseka kufema, uye kuzvimba kwechiso, muromo, maoko uye / kana tsoka.
Kune dzakasiyana-siyana Degarelix kunyevera kuchengeta mupfungwa. Chimwe chazvo ndechekuti mushonga uyu unokwanisa kupfuura nemvura yemuviri (kurutsa, urini, ziya, mafuru). Naizvozvo, iwe unofanirwa kudzivirira kurega mvura yemuviri yako ichisangana nemaoko ako kana imwe ganda remumwe munhu uye mamwe mafafitirwo kwemaawa angangoita 48 mushure mekugamuchira jekiseni reDegarelix.
Vanochengeta vanoyambirwa kupfeka magurovhosi ekudzivirira paunenge uchichenesa mvura yemurwere uye kana uchibata machira akasvibiswa kana mapepa. Nguo dzakasviba uye machira anofanirawo kushambidzwa zvakasiyana kubva kune imwe yekuwachira.
Nepo paine mamwe maDegarelix mhedzisiro yekufunganya nezvayo, kunewo zvimwe zvinobatsira zveDegarelix kutarisira mberi kana uchishandisa mushonga uyu. Mune zvidzidzo zvekiriniki, yakaratidzirwa kuti Degarelix jekiseni inopa kukurumidza kuderedzwa kwemazinga e testosterone pane kumwe kuongororwa kwehomoni kurapwa. Uyu mushonga haawanzo kukonzera yekutanga testosterone kuvhiya iyo inogona kukonzera kuwedzera kwechinguva kwezviratidzo.
Imwe bhenefiti yeDegarelix ndeyekuti mushonga unowanzobvumirwa kwazvo, kunze kwekutsvagurudza kwakaratidza kuti jekiseni -kuita saiti yakaitika mu40 muzana yeiyo yakagadziriswa Degarelix group ndima <1 muzana yeboka leuprolide. Aya maitiro aive akanyanya kupfava kana ane mwero, uye akaitika zvakanyanya mushure mekutanga jekiseni.
Yekutanga datha kubva kune dzinoverengeka kliniki zvidzidzo zvinoratidza kuti kana ichienzaniswa neLHRH agonists, Degarelix yakabatanidzwa nekupfuura kwakanyanya kupona mukati me1st gore rekurapwa. Icho chokwadi chekuti mikana yekubudirira kurapa chirwere chekenza yeprostate yakakwira kana uchishandisa kurapwa iyi ndeimwe yemubatsiro weDegarelix inoita kuti mushonga uyu uite-kuedza.
Degarelix uye doro
Kutora doro muzvikamu zvidiki zvinoita senge kuchikanganisa kubatsira kana kuchengetedzeka kwe degarelix. Nekudaro, iwe unofanirwa kugara uchidzivisa kutora hwakawanda doro paunotora mushonga uyu.
Kana iwe kana mudiwa mune kenza yeprostate, Degarelix chemotherapy pasina mubvunzo ndiyo imwe yemhando dzakanakisa dzekurapa dzaunogona kusarudza. Chikonzero chega chingangofungidzirwa nei ungasarudza kuvhiyiwa pamusoro pekurapa kwehomoni saDegarelix kungave kuri mutengo. Zvakadaro, chero musiyano wemutengo unovharidzirwa nemubatsiro weDegarelix.
8. Zvimwe Zvinyorwa
Iwe unenge uri kushamisika pamusoro pemutengo weDegarelix. Mari yepakati pagore yekurapa naDegarelix inenge $ 4,400. Izvi zvinoenderana nemutengo weanowanika mahomoni ekurapa chirwere chekenza yeprostate. Degarelix mutengo wejekiseni we 80 mg jekiseni iri kutenderera pamadhora 519 wekupihwa hupfu imwe yejekiseni. Iyo mutengo zvakare inoenderana nehekesi iwe yaunoshanyira.
Iwe unogona zvakare kuonaDegarelix tenga online”Shambadziro Iwe unozofanirwa kuchenjera zvakanyanya kana uchitenga mushonga online. Ita shuwa kuti iwe unofanirwa kutarisa kwakakodzera kumashure uye nekushingairira usati waira mushonga kubva kumutengesi wepamhepo. Uve nechokwadi chekuti mutengesi kana iyo online fodya ndeyemutemo uye kuti zvavari kutengesa ndiyo yechokwadi uye yakachena fomu yemushonga.
Degarelix inofanira kuchengetwa pamhepo tembiricha. Ive neshuwa kuchengetedza uyu mushonga kubva pachiedza uye chinyoro. Sezvimwewo mimwe mishonga, chengetedza Degarelix kure neyevana.
Usarase Degarelix poda mumarara mariri kana mumvura ine tsvina, semu muchimbuzi kana pasi pakanyura. Bvunza chiremba wako kana chiremba wemishonga kuti ungarasa sei mishonga inenge yapera kana kuti isisiri kushandiswa.
Van Poppel H, Tombal B, et al (Gumiguru 2008). Degarelix: aino gonadotropin-anosunungura mahormone (GnRH) receptor blocker-zvinokonzeresa kubva gore rimwe, multicentre, zvisarudzwe, chikamu chechipiri dosi-yekutsvaga kudzidza mukurapa kenza yeprostate. Euro. Urol. 54: 805-13.
US National Library yeMishonga National Institutes of Health, Iyo inodhura-yekushandisa kuongorora kwevearelix mukurapa kwepamberi-inotsamira kenza yeprostate muUnited Kingdom, Lee D1, Porter J, Brereton N, Nielsen SK, 2014 Apr; 17 (4 (233) ): 47-XNUMX.
Gittelman M, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008). A 1-gore, yakavhurika label, yakasarudzika chikamu II dhi yekutsvaga kudzidza kweassarelix yekurapa kenza yeprostate kuNorth America. J. Urol. 180: 1986-92.